AAS Statement on Military Rule in Myanmar - Association for Asian Studies
Issued by the Association for Asian Studies Board of Directors
On February 1, 2021, the Myanmar Tatmadaw (Army), led by Commander-in-Chief General Min Aung Hlaing, sieged parliament and declaredastate of emergency military rule for the next year. The general justified this coup though accusations of election fraud; the Election Commission refutes this claim. State Councillor Aung San Suu Kyi and her party, the National League for Democracy (NLD), wonalandslide victory (83%) in the November 2020 general election and MPs were scheduled to assume office on February first. Instead, the Tatmadaw detained Aung San Suu Kyi and key members of the newly-elected government, and began to round up activists, intelligentsia affiliated with the NLD, monks, advisors, and most recently, Election Commission officials.
Following nearly five decades of military rule, Myanmar had begun transfer of power to civilian governance witha2008 military-drafted constitution and the start of elections in 2010. The NLD became the majority party following the general election in 2015. During the last decade, there have been valuable gains in freedom of expression, including those in the higher education sector, international education, research and exchange. The February 2021 coup representsahuge step backwards.
Outraged by the military’s recent return to power, hundreds of thousands of people throughout the country have taken to the street to protest the coup, the detentions, and the reversal of democracy in Myanmar. Entire sectors of workplaces have struck and joined protests in their work uniforms, including university faculty, barristers, airport tower communications, health workers, civil servants and in some cases, police who have broken rank to join with the protesters. The military has countered these protests by shutting down the internet, blocking Facebook, imposingacurfew, and banning gatherings of more than five people. There have been cases of police use of physical violence against unarmed protesters in Naypyidaw and Mawlamyane. Outside of Myanmar, protests have been held at government buildings, Myanmar consulates and embassies overseas, including in Bangkok, Canberra, London, Taipei, Tokyo, and Washington.
The Association for Asian Studies joins citizens and scholars worldwide in our condemnation of the Myanmar military’s assault on freedom of information and expression. We urge General Min Aung Hlaing and the Tatmadaw to recognize the will of the majority, to release all political prisoners, and to return power to the elected government so that they may exercise the right to rule vested in them by the people of Myanmar.
February 24, 2021 update: The Association for Asian Studies thanks Kenneth Wong, Yu Yu Khaing, and Ye Min Tun for translating the above statement into Burmese.
မြန်မာနိုင်ငံစစ်အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ AAS ၏ ထုတ်ပြန်ချက်
၂၀၂၁ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့တွင် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်သည် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကို ထိန်းချုပ်ကာ၊ တစ်နှစ်ကြာအရေးပေါ်အခြေအနေနှင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလကိုကြေညာလိုက်သည်။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးက ရွေးကောက်ပွဲမသမာမှုများ ကြောင့်အာဏာသိမ်းရသည်ဟု ဆင်ခြေပေးခဲ့သော်လည်း ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်က ထိုစွပ်စွဲချက်ကို ငြင်းပယ်ပါသည်။ နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ပါတီဖြစ်သော အမျိုးသားဒီမိုကရေးစီအဖွဲချုပ်သည် နိုင်ဝင်ဘာလရွေးကောက်ပွဲတွင် ၈၃% မဲဖြင့် အပြတ်အသတ်အနိုင်ရခဲ့၍ အရွေးချယ်ခံလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၁ရက်နေ့တွင် တာဝန်စတင်ထမ်းဆောင်ကြရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် တပ်မတော်သည် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပါအဝင် အစိုးရသစ်တွင်အရေးပါသော ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးလူမှုရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့နှင့်ဆက်နွယ်နေသော ပညာရှင်များ၊ ထို့နောက် သံဃာတော်များ၊ အကြံပေးအရာရှိများနှင့် နောက်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များ ကိုပါ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
နှစ် ၅၀နီးပါးစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကာလကိုကျော်လွန်ပြီးနောက် မြန်မာနိုင်ငံတွင်၂၀၀၈ ခုနှစ်၌ အခြေခံဥပဒေကိုပြဋ္ဌန်း၍ အရပ်သားအစိုးရထံအာဏာလွှဲပြောင်းကာ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ရွေးကောက်ပွဲစတင်ကျင်းပခဲ့သည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲပြီးသော် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်သည် အနိုင်ရလူများစုပါတီဖြစ်လာသည်။ ထိုဆယ်နှစ်အတွင်း အဖိုးတန်သော လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့် ဖွံ့ဖြိုး ကာ အဆင့်မြင့်ပညာရေး၊ နိုင်ငံတကာပညာရေး၊ လေ့လာရေး၊ ဆက်ဆံရေးများတိုးတက်ခဲ့သည်။ ဖေဖေါ်ဝါရီလအာဏာသိမ်းခြင်းသည် ဆိုးဝါးသော နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်ခြင်း ဖြစ်၏။
စစ်တပ်၏အာဏာပြန်သိမ်းခြင်းကိုမကျေနပ်သောကြောင့် နိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးတွင် ရာထောင်ပေါင်းများစွာသောပြည်သူတို့သည်လမ်းပေါ်မှာချီတက်ကာ အာဏာသိမ်းခြင်း၊ ဖမ်းဆီးခြင်းများ၊ ဒီမိုကရေစီကျင့်ထုံးဆုံးရှုံးရခြင်းများကို ဆန္ဒပြကြလေသည်။ တက္ကသိုလ်မှ ဆရာဆရာမများ၊ ရှေ့နေများ၊ လေကြောင်းဆက်သွယ်ရေးဝန်ထမ်းများ၊ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းများ၊ အစိုးရဝန်ထမ်းများသာကမ၊ အချို့သောရဲများပါအပါအဝင် အလုပ်ဌာနအသီးသီးမှဝန်ထမ်းများသည် လုပ်ငန်းဝတ်စုံဝတ်လျက် သပိတ်မှောက်ကြကုန်သည်။ စစ်တပ်သည် အင်တာနက်ဖြတ်တောက်ခြင်း၊ Facebook ကိုတားမြစ်ခြင်း၊ ညမထွက်ရအမိန့်ထုတ်ခြင်း၊ ၅ဦးအထက်လူစုလူဝေးကိုကန့်သတ်ခြင်းများဖြင့် လူထုသပိတ်ကို တုန့်ပြန်ခဲ့သည်။ နေပြည်တော်၊ မော်လမြိုင် စသည့်နေရာအချို့၌ ရဲတပ်ဖွဲ့က လက်နက်မဲ့ဆန္ဒပြသူများအပေါ် အကြမ်းနည်းသုံးခဲ့သည်။ ဘန်ကောက်၊ ကင်ဘာရာ၊ လန်ဒန်၊ တိုင်ပေ၊ တိုကျို၊ ဝါရှင်တန် အစရှိသောပြည်ပရှိ မြန်မာသံရုံးများရှေ့တွင် လူထုက ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
အာရှလေ့လာရေးအသင်းသည် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှပညာရှင်များ၊ တိုင်းသူပြည်သားများနှင့်လက်တွဲ၍ သတင်း လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုခွင့်ကို ဖိနှိပ်ချုပ်ခြယ်သော မြန်မာစစ်တပ်ကို ရှုတ်ချ၏။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်နှင့် တပ်မတော်ကို မြန်မာပြည်သူလူထု၏ဆန္ဒအားလေးစားရန်၊ ဖမ်းဆီးထားသော နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကို လွှတ်ပေးရန်၊ ပြည်သူကအပ်ထားသောအာဏာဖြင့် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရှိသော ပြည်သူ့အရွေးအချယ်ခံအစိုးရထံ အာဏာပြန်လည်လွှဲအပ်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်သည်။
Department of South and Southeast Asian Studies, UC Berkeley
Burmese language instructor, Adjunct Professor